စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်နိုင်ရန်မည်သို့ | USAHello ထံမှအလုပ်ရှာဖွေရေးအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
သငျသညျအစဉျအမွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုခဲ့ဖူး? ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်အပြေးလွတ်လပ်သောဖြစ်မယ့်ကြီးမြတ်လမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်လည်းပိုပြီးသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်စေ့စပ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်.
အလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးနှင့်အတူ Start! မူရင်းအယူအဆနှင့်အတူတက်လာရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာင်. သငျသညျတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခံရမဟုတ်သောဝယ်လိုအားသို့မဟုတ်လိုအပ်ကြောင်းကိုတွေ့မြင်လျှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်နိုင်ရန်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်. သင့်ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဝယ်လိုအားလည်းမရှိဆိုပါကစျေးကွက်သုတေသနဆောင်ရွက်ခြင်းသငျသညျပွောကွလိမျ့မညျ. စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း, ဖောက်သည်, နှင့်စတင်မှသင်တို့အဘို့အကောင်းဆုံးသောနေရာများ. စျေးကွက်သုတေသန၏နမူနာစစ်တမ်းများများမှာ, အင်တာဗျူး, နှင့်အုပ်စုများကိုအာရုံစူးစိုက်.
သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူခင်မှာ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ: သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဘာတွေလုပ်နေလဲ? သငျသညျအဘယျသို့ပွုလ like ဘူး? သင်ရုံငွေရှာဖို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မသွားသင့်တယ်, ဒါကြောင့်သင်၌စိတ်ဝင်စားရှိသည်သောဧရိယာကောက်. သင်တစ်ဦးကုမ္ပဏီ run ဖို့လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအစုံရှိပါကထိုအခါရိုးရိုးသားသားအကဲဖြတ်ရန်. သငျသညျအလုံအလောက်ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသည် Do? သင်ပြုခဲ့လျှင်, သငျသညျအလုပျသို့ငုပ်နှငျ့သငျတလျှောက်ကိုသွားအဖြစ်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါတယ်. သင်တို့မူကားမဆိုကျွမ်းကျင်မှုသို့မဟုတ်အလုံအလောက်အသိပညာရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, သင်ကူညီအရင်းအမြစ်များကိုရှိပါတယ်. သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်ချေးငှါးစာအုပ်တွေရန်သင့်ဒေသခံစာကြည့်တိုက်ကိုသွားနိုင်ပါတယ်, သင်အွန်လိုင်းသင်တန်းများယူနိုင်ပါသည်, သငျတို့သစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုဖြစ်ရပ်များ join လို့ရပါတယ်.
တစ်ဦးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့ပန်းတိုင်များကိုအလေးထားဖေါ်ပြတဲ့လမ်းညွှန်ဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုသင်အောင်မြင်ရန်စီစဉ်ပုံကို. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အစီအစဉ်၏အဓိကဒြပ်စင်သတ်မှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်. သငျသညျရန်ပုံငွေများစတင်ရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုငွေရေးကြေးရေးအသငျသညျကိုထောကျပံ့ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်နိုင်သည်သူကလူတွေကိုဖျောပွနိုငျ. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအစီအစဉ်ကိုရေးသားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
သငျသညျလညျးဆောင်ပုဒ်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်, သို့မဟုတ် tagline, မူသောသင်တို့မူထူးခြားတဲ့အရောင်းရဆုံးအဆိုပြုနိုင်ပါတယ် (USP). USP သငျသညျလူတိုင်းအခြားသူထံမှသင်တို့ခွဲခြားရန်ကိုသုံးနိုင်သည်မဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသင်ဖို့ထူးခြားသောဖြစ်သင့်, သင်သက်သေပြနှင့်က execute နိုင်တော့မည်ရန်ရှိသည်. ဒါဟာလူတွေကိုမှတ်မိနိုင်နှင့်ဖောက်သည်များအရလိမ့်မည်ဟုအကျိုးအတွက်ဖော်ပြသင့်ကြောင်းတိုတောင်းတဲ့ထားသောစာပိုဒ်တိုများဖြစ်ရပါမည်.
သင်တို့သည်လည်းလက်ျာတည်နေရာကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်. အချို့ကိစ္စများတွင်, ဈေးအပေါဆုံးတည်နေရာကိုသင်ပထမဦးဆုံးမှာပိုက်ဆံကယ်တင်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ. အခြားကိစ္စများတွင်, သငျသညျကလူသငျသညျမွငျနိုငျတဲ့အဓိကတည်နေရာတွင်ရှိမဟုတ်လျှင်သင်အောင်မြင်မည်မဟုတ်.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတော်ကြာမျိုးရှိပါတယ်. သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိ. အသုံးအများဆုံးသူတွေကိုဝါး proprietorship များမှာ, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း, အသင်း, နှင့်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီ. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အကောင်းအဆိုး cons ရှိ. အဆိုပါအရေးကြီးသောအရာသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်ပါသည်နှင့်သင့်လိုအပ်ချက် fit မှလက်ျာဘက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာရွေးချယ်ရာတွင်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆောက်အဦများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူ.
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ရန် သင့်ရဲ့ပြည်နယ်နှင့်အတူ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်လာသည်နှင့် (အများဆုံးကိစ္စများတွင်) အမည်တူအောက်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာကနေပြည်နယ်အတွက်အခြားသူတွေကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ.
သင့်ရဲ့ဖက်ဒရယ်နှင့်ပြည်နယ်အဘို့အ Apply အခွန် ID နံပါတ်များ. သငျသညျအခှနျပေးချေရန်ဤနံပါတ်များကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင့်ရဲ့ဖက်ဒရယ်အခွန် ID number ကိုလည်းသင့်ရဲ့အလုပ်ရှင်သက်သေခံနံပါတ်ဟုခေါ်သည် (တစ်ဦးက) နှင့် IRS ကိုထုတ်ပေးနေသည်. သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အခွန် ID number ကိုပြည်နယ်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းအဘို့ဖြစ်၏နှင့်သင့်နိုင်ငံတော်ကထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်. (တစ်ဦးတည်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ပြည်နယ် ID နံပါတ်မလိုအပ်ပါဘူး။) သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ID ကိုနံပါတ်များကို Get.
အတော်များများကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုအပ် လိုင်စင်နှင့်ပါမစ် တရားဝင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်. ပြည်နယ်နှင့်ဖက်ဒရယ်ခွင့်ပါမစ်နှင့်လိုင်စင်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏နာမတော်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်ပါသလား, ကုန်ပစ္စည်းများ, သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ? သင်လုပ်နိုင်သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအခြားသောဤဒီတော့ဘယ်သူမှသူတို့ကိုကိုအသုံးပြုသည်. သင်တို့သည်လည်းသင်သည်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကအမှတ်တံဆိပ်အမည်သုံးပြီးကြသည်မဟုတ်သေချာစေရန်စစ်ဆေးသင့်. အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းကိုလေ့လာပါ.
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငွေကြေးဖို့ပိုက်ဆံရှာဖွေခြင်းတစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ငွေစုအဖြစ်အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲဖို့နိုင်မည်အကြောင်း, သို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု. သို့မဟုတ်သင်ဘဏ်ထံမှချေးငွေလျှောက်ထားစေခြင်းငှါ. ဤသူသည်သင်တို့လက်ျာဘဏ်သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအနာဂတ်စီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့ကိုရှာဖွေရာမှာအမှတ်ဖြစ်ပါသည်. သင်လုပ်နိုင်သည် ဘဏ်များနှင့် ပတ်သက်. အခြေခံအချက်အလက်ကိုဖတ်ပါ နှင့် ချေးငွေများနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူ.
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ် မူတည်., သငျသညျတခုရုံးလိုအပ်နိုင်ပါသည်, စတိုးဆိုင်, စက်ရုံအာကာသ, ဝုဏ်၏သို့မဟုတ်အခြားအမျိုးအစား. သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အာကာသယ်ယူသို့မဟုတ်ငှားရမ်းပါလိမ့်မယ်လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ပေးရန်လိုအပ်ပါမည်.
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖောက်သည်ဆွဲဆောင်နေသည်ဒါကြောင့်သင်ကအရာအားလုံးကို set up ရန်ခက်ခဲလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သင်ပင်သင့်ရဲ့စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်ရုံးဒီဇိုင်းသင်ကူညီမယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ငှားရမ်းစေခြင်းငှါ.
သူတို့စျေးဝယ်သွားပါသို့မဟုတ်ပင်တစ်ရုံးလာသောအခါဖောက်သည်တစ်ဦးအတွေ့အကြုံအတွက်ရှာဖွေနေပါတယ်. ဒါပေမယ့်သင်ရုံထွက်စတင်လျှင်, ကြီးမြတ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုရှိသည်ဖို့ ပို. ပင်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
လုပ်သားအင်အားအဘယျသို့သောသင့်ဘဝအတွက်သင့်လုပ်ငန်းဆောင်ကြဉ်းဖို့လို? မိသားစုဝင်များ, မိတ်ဆွေများက, သငျသညျအထဲကစတင်ကြသောအခါနှင့်စီးပွားရေးမိတ်ဖက်တစ်ဦးအကြီးအပိုင်ဆိုင်မှုနိုင်ပါတယ်. သင်ပိုမိုန်ထမ်းကိုရှာဖွေရန်ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်နိုင်ပါသည်. သင်သည်လက်ျာကလူရဖို့အချိန်ကိုယူပါလျှင်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ခွဲဝေပေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အခြေခံရည်ရွယ်ချက်တန်ဖိုးတစ်ခုခုဖန်တီးတို့သည်ငွေကိုလဲလှယ်ရှိလူများကပေးရန်ဖြစ်ပါသည်. စျေးကွက်များနှင့်အရောင်းသင့်ရဲ့ဖောက်သည်ကြောင်းတန်ဖိုးကိုဆက်သွယ်နှင့်ပို့့မော်တော်ယာဉ်များဖြစ်ကြသည်. သငျသညျထူးချွန်နှင့်သင်၏ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကယ်နှုတ်တော်မူပါလျှင်, ခှဲခွားခွငျး, နှင့်ကောင်းမွန်သောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု, သငျသညျဖောက်သည်ရဖို့နဲ့သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်မှုစေမည်!
ဂလားပင်လယ်အော်ဧရိယာအတွက်ဆူဒန်အစားအစာရှာဖွေနေ? Z ကို Zoul မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်